Oh My Ghost 6
Oh My Ghost တို့ India နန်းတော်ထဲသို့ရောက်သောအခါဝယ်….ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် “Oh My Ghost 6”
Kohtee Aramboy, Yingsak Chonglertjetsadawong, Jaturong Mokjok
ဒါရိုက်တာ Poj Arnon
ဇာတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန် 1 Hr 49 Min
Whenastreet urchin findsalamp withagenie inside, he uses the lamp to turn himself intoaprince in order to win the heart ofabeautiful princess. But an evil vizier is after the lamp, too
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကြား နိုးကြားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်က ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ သျှင်မရဲ့ ဟစ်တိုင်ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှာတော့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ တစ်ခုလပ်အမေဇာတ်ကောင် ဒေါင်းနီနေရာမှာ အိန္ဒြာကျော်ဇင် (အူဝဲ) က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီး မေသန်းနု၊စိုးမိုးကြည်၊မုဏ်းအပါအဝင် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အသစ် တော်တော်များများက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ ဟိန်းစိုးက ရိုက်ကူးပုံဖော် ထားပါတယ်။
ရင်ခွင်တံခါးကိုခေါက်၍ နှလုံးသားပေါ် ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ဧည့်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
Godzilla:King Of Monster
ဇာတ်လိုက်ကျော် Godzilla ကြီးနှင့် သူ၏ ပြိုင်ဘက် ဟိုးရှေးဒဏ္ဍာရီထဲက Titan ကြီးများ ထူးခြားသော စွမ်းအင်တွေကို အသုံးပြုကြပြီး ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ကြပုံကို ... ရင်သိမ့်တုန် ခံစားကြည့်ရှုရမည့် Godzilla : King of the Monsters
“ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ နင်...ဂရုမစိုက်လို့ မရဘူး ဘဲဥမ၊ လူဆိုတာ အမှန်တရားကို မသိနိင်ခင် အများပြောတာကိုပဲ ယုံကြတာ” (ညိုထွန်းလူ) " ရုပ်ကလေးသနားကမားဆိုပြီး သွားကျမနေနဲ့နော် ကောင်မ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်နေရမယ်..(မရင်လှ) ဘဲဥမတို့က ကိုယ့်ကို လာရိုင်းရင် အပြန်တစ်ရာ ပြန်ရိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စွာတေးလန် (ဘဲဥမ) ဘဲဥမ...နင်ငါ့ကို တကယ်ရင်မခုန်ဘူးလား (တင်မောင်ဝင်း)
X-Men Films Seriesတွေထဲ နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ X-Men: Apocalypseရုပ်ရှင်အပြီး 1992မှာ Spaceထဲအထိ X-Men တွေဟာ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ဆောင်ရင်း မတော်တဆတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Jean Grey ဟာ သူ့မရဲ့ စွမ်းအားတွေကို ထိန်းချုပ်မရနိုင်တော့တဲ့အထိ ဆိုးရွားလာတဲ့အခါ...
ကံကြမ္မာကို အကောင်းချည်းသက်သက်ဖြစ်ဖို့ အယူတော်မင်္ဂလာ အရ ... အစီအရင်တွေနဲ့ စီမံပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ... စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီး Mr.Yes ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတရားလောင်းကြေးထပ်သည့် စိန်ခေါ်ပွဲ .... ဒီစိန်ခေါ်ပွဲကို ... ၀င်နွှဲကြမယ့်သူ (၇) ဦး ... သိန်းနှစ်သောင်းတန် စိန်ခေါ်ပွဲနဲ့အတူ အချစ်အားပြိုင်ပွဲကိုပါ... မြင်တွေ့နေကြပုံစံမျိုးနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်ဖြင့် .. မြူးမြူးသွက်သွက် ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်း မလွတ်တမ်းကြည့်နေရအောင် ရိုက်ကူးထားသည့် ... အယူတော်မင်္ဂလာ ( Black Rose Mission) - ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ...
အောင်ရွှေ လည်တော့လည်တယ် တပတ်မပြည့်တဲ့သူ ။ သူငယ်ချင်းငွေမောင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘန်ကောက်ကဂိုဏ်းစတားတွေကို ဘယ်လိုပညာပြမလဲဆိုတာကတော့ . . . မြန်မာ နဲ့ ထိုင်း ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတယ့် "LadyBoy" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
သံသယဆိုတာဝင်လာရင် အချစ်ဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း ထွက်သွားတတ်ကြတယ်..... နေဝင်ချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရင် သံသယကင်းပြီး..... ပကာသနကင်းရှင်းတဲ့.......